My iPhone odide anọwo na-ehichapụ n'amaghị na m ga-ukwuu amasị weghachi ha. Nwere ike o biko nyere m aka? - Jenniffer
Emmergency! -Eme dị ka ndị a:
1) Kwụsị eji gị iPhone ugbu a
Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ ozi ederede site na iPhone accidently, ha na-agaghị na-arahụ ozugbo. Ha bụ ebe gị iPhone, na-eche ọhụrụ dta ka overwritten ha. Iji megharịa ehichapụ odide on iPhone, biko kwụsị gị iPhone ozugbo, ma ọ bụ ọhụrụ data ga-eme ka ndị a na-ehichapụ ozi ederede esiwo n'ebe ahụ pụọ ruo mgbe ebighị ebi!
2) Chọta a kọmputa imezi ehichapụ ozi ederede na iphone
Ị nwere ike ịgbanwe ehichapụ ozi ederede na iPhone ozugbo. Kama, ị mkpa a Windows PC ma ọ bụ Mac iji weghachi ehichapụ iPhone ozi ederede. The sonner, mma, n'ihi na ọhụrụ data na-eme mgbe niile, ọbụna mgbe a na-akpọ gị.
Nọgidenụ na-Chiefs on mgbe ị accidently ehichapụ odide on iPhone. E nwere ohere na i nwere ike inwe ha azụ. Naanị ihe ị chọrọ ime bụ ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma họrọ otu n'ime ndị 3 mgbake ụdịdị dị ka ọnọdụ gị imezi ehichapụ ozi ederede na iphone.
Solutions 1: Wepu Deletd iPhone Texts si iPhone (ma ọ bụrụ na ọ bụ adịghị anya mgbe ị ihichapụ odide on iPhone)
Ngwọta 2: Weghachi ozi ederede azụ iPhone site iTunes ndabere (ma ọ bụrụ na ị na kwadoo iPhone na iTunes)
Ngwọta 3: Wepu ehichapụ Text on iPhone site iCloud ndabere (ma ọ bụrụ na ị na kwadoo iPhone ka iCloud)
Extra Atụmatụ maka Olee otú iji Hichapụ Texts-adịgide adịgide
Wepu ehichapụ Texts on iPhone Software
Ụwa mbụ software imezi ehichapụ ozi ederede na iPhone.
Wepu ehichapụ ozi ederede na iphone saefly na ngwa ngwa;
Restor ehichapụ odide on iPhone na Mgbakwụnye;
Export ehichapụ ederede dị viewable na editable HTML, XML, ma ọ bụ faịlụ ederede;
Na-akwado iPhone 6s (Plus), 6 (Plus), 5s, 5, 4s, 4, 3GS na ọhụrụ iOS 9;
Solutions 1: Wepu Deletd iPhone Texts si iPhone
Nzọụkwụ 1 Họrọ "naputa site na iOS Ngwaọrụ"
Download, wụnye na-agba ọsọ usoro ihe omume na kọmputa gị. Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ window dị ka ihe snapshot na-egosi na n'akụkụ aka nri. Họrọ "naputa site na iOS Ngwaọrụ".
Nzọụkwụ 2 iṅomi maka ehichapụ ederede na iPhone
Pịa "Malite iṅomi" na-iṅomi gị iPhone maka ehichapụ akụkụ. Ọ nwere ike na-ewe nkeji ole na ole iṅomi gị iPhone. Biko na-gị iPhone ejikọrọ na kọmputa. Mgbe ahụ niile ehichapụ ederede na iPhone ga-egosipụta na isi window. Ị nwere ike na-ele ha otu otu na ego ndị chọrọ n'anya. Pịa "Naghachi" mbupụ ha na kọmputa gị dị ka a HTML, XML ma ọ bụ ederede faịlụ.
Cheta na: ma ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, na windo anya obere dị iche iche. Echegbula! Na-eme ka ihe ọ na-egosi gị ka ị na-eme.
Ngwọta 2: Weghachi ozi ederede azụ iPhone site iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1 Họrọ "naputa site na iTunes ndabere File"
Mgbe launching Wondershare Dr.Fone maka iOS, họrọ "Iweghachite si iTunes ndabere File" na ọhụrụ iTunes ndabere nke na-agụnye ozi ederede na ị na-ehichapụ on iPhone. Pịa "Malite iṅomi" wepụ iPhone ehichapụ odide ndị e si iTunes ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 2 Jikọọ gị iPhone na kọmputa na-ike iṅomi ya
Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na faịlụ niile na iTunes ndabere na-amịpụtara, gụnyere akụkụ. Pịa Ozi na ekpe sidebar ele ozi ederede otu-site na otu. Ego mkpa ndị na pịa "Naghachi" imezi iPhone ehichapụ odide na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Ngwọta 3: Wepu ehichapụ Text on iPhone site iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1 Họrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ"
Na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị na-ahọrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ". Na mmapụta window, banye wiht gị iCloud akaụntụ. Mgbe ị na-ahụ ihe niile ndabere faịlụ, họrọ onye si nke ị chọrọ imezi ehichapụ ederede na ibudata ya.
Nzọụkwụ 2 Preview ehichapụ odide
Mgbe download iCloud ndabere faịlụ, ị nwere ike iṅomi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na Dr.Fone maka iOS. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ihuchalu iPhone ehichapụ odide otu-site na otu. Ego mkpa ndị na pịa "Naghachi" mbupụ ha ka gị na kọmputa
Video Tutorial: Olee imezi ehichapụ ozi ederede site na iPhone
Ụfọdụ ndị na-ihichapụ odide na ha iPhone izere onye ele nzuzo ha. Ebe ọ bụ na Wondershare Dr.Fone maka iOS pụrụ imezi ehichapụ iPhone akụkụ, ụfọdụ ndị ọrụ ịjụ esi mee ka iPhone ehichapụ ozi ederede ruo mgbe ebighị ebi. Azịza ya dị mfe - agbalị Wondershare SafeEraser ka ihichapụ ozi ederede site na iPhone. Right now, Wondershare SafeEraser a na-emelite ka ihichapu ehichapụ ozi ederede site na iPhone. Iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị, ị na-adịghị mkpa iji weghachi ma ọ bụ ihichapu gị iPhone ọ bụla ọzọ. All data ehichapu site Wondershare SafeEraser-apụghị natara, ọbụna na Wondershare Dr.Fone maka iOS.
Olee otú Tọgharia iPhone enweghị Apple ID
iPhone Notes Iweghachite: Olee naghachi ehichapụ Notes si iPhone
> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi-ehichapụ Texts on iPhone